Iintlobo ze-SEO ukusuka kwi-Semalt Expert
Ngamanye amaxesha omnye wenza umbuzo wophando kwaye utshintshe "Ngenisa" kwiinjini zophando ezifana ne-Google okanye iBing, iphepha lemiphumo yosesho livela ngohlu lweemidlalo ezikhoyo. Zonke iiwebhusayithi kunye namakhasi ewebhu kuloluhlu ziquka uhlobo oluthile lwegama elingundoqo elifunyenweyo. Nangona kunjalo, impazamo eqhelekileyo abantu benza ukuba izikhonkwane ezifanelekileyo zibonise kuqala kwiphepha. Abasebenzisi abanolwazi bayazi ukuba oku akunjalo. Kunoko, kukho inkqubo yentengiso yewebhu efumana ezinye iiwebhusayithi zibekwe ngcono kunezinye. Ngenxa yoko, ezo ndawo zilungele phambili zibonisa phambi kwabanye kwi-SERP. Yindlela yeemarike eyaziwa ngokuba yi-Search Engine Optimization, okanye i-SEO.
Inkqubo ye-SEO isebenzisa i-rankings ngokuqwalasela umbuzo othi iintlobo zezivakalisi kwibhokisi lokukhangela. Xa iinjongo zokukhangela ziqhuba umbuzo, i-domain enegunya eliphezulu livela phezulu kwezi ziphumo ze-injini. Ophakamileyo kukuba, ngakumbi ithuba lokuba umntu owenza umbuzo uza kutyelela kwiphepha elithile. Isiphumo sonyuswa kwezithuthi kunye namanqanaba aguqukayo aphezulu angenakunceda kwiwebhusayithi.
uNik Chaykovskiy, u uSemalt uMphathi oyiNtloko umPhumelelo weMathengi, uchaza ukuba isizathu sokuba i-SEO ibone ukuba kuyimfuneko ukubeka iindawo ezinxulumene nayo imfuneko yokubambisana nayo yonke imibuzo eyenziwa ngabavakashi. Kunokwenzeka ukufeza oku kumanyathelo amabini. Eyokuqala kukuba ukwazi zonke iifayili ezibhalisiweyo..Kwenza kube lula ukucofa kwaye ukhethe yonke idatha efanelekileyo efana nombuzo owenziweyo. Isinyathelo sesibini kukubeka iphepha kwikhasi lewebhu ngokubhekiselele ekuthandeni okufumanayo okanye kwendlela efumana ngayo. Ngako oko, oku kuvelisa iindlela ezimbini ezibalulekileyo ezisetyenziselwa ukufumana iphepha kunye ne-SEO: ulwazi oluhambelana nombuzo, kunye nokuthandwa kwephepha.
Iintlobo zeeNjini zoKhenketho
I-White Hat Ukulungiswa: Indlela ihambelana nazo zonke iinkqubo ezibekiweyo ngeenjini zokukhangela kunye nolwazi ngesihloko. Ibuyisela ulwazi olwendwendwe oluvakatyelayo, oluye lwandisa ukuthandwa kwesayithi okanye iphepha. Kungadla ixesha, kodwa kwandisa ithuba lokubeka phezulu kunezinye i-SEO. Okubalulekileyo kukubonelela ngomxholo ochaphazelekayo kwaye kungabi lula ukufikelela kwiinjini zokukhangela.
I-Black Hat Ukulungiswa komsebenzi: Iyahambelana nento yokulungiswa kwentsimbi emhlophe imele kuzo zonke iimpawu zayo. Ukulungiswa kwentliziyo emnyama ayigcinanga imimiselo emiselweyo ngeenjini zokukhangela. Ezinye zeendlela ezisetyenziswe kule nto zibandakanya ukugxila, ukugawula i-spamming kunye nokudibanisa imfuyo. Kuphucula ukukhangela, kodwa kuphela ixesha elincinane. Abantu abayisebenzisayo bafuna ukunqumla iikona, kodwa ekugqibeleni iinjinjini zitshintshe.
I-Gray Hat Ukulungiswa kwezinto: Iquka into encinci yezobugcisa ezimnyama kunye ezimhlophe.
Ukuqhuba i-SEO ayikho indlela echanekileyo okanye engalunganga yokuhamba ngayo. Nangona kunjalo, ngaphambi kokuba utyalomali, omnye kufuneka ahlole ingozi ehambelana nayo. Ngaphandle koko, omnye uya kugqitywa ngezohlwayo ezinkulu kwiinjini zokukhangela okanye kwiimeko ezimbi kakhulu, zivaliwe zivela kumaphepha aphezulu.